''खाडीको खपुस र बासीभात - MONGOL KHABAR
''खाडीको खपुस र बासीभात
भन्नि गर्छन सबैले प्रदेश मै रमाइलो छ । जसले भोगेको छ, उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ प्रदेशको पिडा के हो भनेर, सायद आज यो मरुभुमीमा नआएको भए मेरो देशले मेरो पसिनाको आर्जन खान पाउदैन थियो होला ।
४०/५० डिग्रीको घाममा जसरी समय बित्दै गयो त्यसरी नै मेरो उमेर ढल्कदै गयो । दुइ पैसा कमाउनि सपना परिवारलाइ खुसि र राम्रो गास बास कपास दिन सकुम भन्नि सपना सधैको अधुरो रहदै जान्छ । दिनहु पसिना बगाउछु साहुको गालि सहन्छु (याल्ला सोरा ) जस्ता भासाले मेरो होस् उडेर जान्छ, ।
मेरो रहर भनौ या बध्याता तर मैले सहनु पर्ने हुन्छ सपनाको महल बनाउने आशामा सारा सपना भत्कदै जान्छन सायद म गरिबीको कारणले होला । यहाको राष्ट्रिय खाना भनेको नै खपुस (रोटी) हो घाटी बाट छिर्दैन तर पनि यी दुइ चिज नखाई जिउदो रहिदैन कि भन्नि ठुलो चिन्ता हुन्छ । ( बासीभात र खपुस ) बेलुका पकाउनु पर्नी अनि प्लास्टिकमा प्याक गरि बिहान राम्रो संग उज्यालो हुन नपाउदै गाडीको सिट भेट्न दौडिनु पर्नी यही मेरो बाध्यात होलान ।
सायद मेरो देश र मेरो योग्यता अनुसारको जागिर मिल्थियो भनि म लगायत सारा नेपालि दाजुभाइले यो मरुभूमिको तातो हावा खानु पर्दैन थियो । कोइ रोडमा खन्नि काम गर्छन त् कोइ ठुला ठुला बिल्डिंगको सिसा पुछ्नी, कोइ टावोर अग्ला अग्ला बिल्डिंगमा लेबर काम गर्दै दिन चाय्रा बिताएका हुन्छन । यो सब मेरो देशले बुज्देको भए सधै भरि बेदिसिको सिकार भएर बस्नु पर्नी थिएन होला । दिन भरि काम गरेर कोठामा आइ आराम गर्नु पाउदा सबै दुख भुल्छु त्यो चिसो एसीको हावा कति सित्तल महसुस हुन्छ ।
दिनभरिको थकाइ मेटाउन चिसो एसीको साहेता लिनु पर्नी हुन्छ, कोइ सुतेसी सुतेको सुतै हुन्छन सायद यहाको मौसम नै यस्तै होला याहा त यति गर्मि यति तातो घाम तातो हावा, उडेको चरी पनि बालुवामा पुक्लुक्क/ पुक्लुक्क खसेको हुन्छ महंगी उस्तै छ महिना भरि काम गरेर आको तलबले आफु खानि कि घर परिवार हेर्नि धाउ धाउ हुन्छ अनि कसरि जिबिका चलाउनु ?
नेपाल बाट विदेश जानु पर्यो भनि कदम चाल्दा नेपाल देखि को दलाल विदेश सम्म भोग्नु पर्नी हुन्छ यो कस्तो देश कस्तो संसार मान्छे ले मान्छे बेच्ने अनि बेचिने हामि दुखि गरिब. (यहि रहेछ खाडी को खपुस र बासीभात)
कोटथर ५ थाम्बेसी
नवलपरासी ( नवलपुर ) गैडाकोट सुभ टोल !
Tags # प्रबिधी # बिबिध
Labels: प्रबिधी, बिबिध